Betas koa dia navoaka ho an'ny mpamorona watchOS 4.2.2 sy tvOS 11.2.5 | Avy amin'ny mac aho
Betas koa dia navoaka ho an'ny mpamorona watchOS 4.2.2 sy tvOS 11.2.5
Ny tolakandron'ny alarobia 3 janoary 2018 ity no nofidian'i Apple hametraka eo ambony latabatra ny kinova beta voalohany amin'ny taona macOS High Sierra 10.13.3, iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 ary tvOS 11.2.5 ho an'ny mpamorona. Amin'ity tranga ity dia mila milaza isika fa ny fanatsarana nampiharina dia mifantoka amin'ny fanitsiana ny lesoka sy ny fanatsarana mahazatra ny fitoniana ao amin'ny rafitra.
Apple dia tsy saro-pady amin'izao fotoana izao ary mamoaka kinova misy fanitsiana kely mba hanohizan'ny mpandraharaha fitiliana. Tsy azontsika antoka raha misy vaovao miavaka ao amin'ny interface interface na ny endri-javatra vaovao, fa amin'ny fotoana namotsorana azy ireo, tsy misy mpandraharaha miresaka momba ny fanovana miavaka amin'ireo andiany watchOS sy tvOS ireo.
Ny Apple Watch sy ny Apple TV dia roa amin'ireo vokatra izay nahazo tombony betsaka indrindra tamin'ireo fialantsasatra ireo tamin'ny resaka varotra, indrindra ny Apple Watch ary izany dia mahatonga ny ezaky ny injeniera ao amin'ny rafitra fiasa ho lehibe kokoa mba tsy hahomby na mamantatra olana. Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia manohy ny fanatsarana ny OS samihafa misy: tvOS, watchOS dia tsy ankanavaka ary eo am-pelatanan'ny mpamorona ihany koa izy ireo handrava ny rafitra. Ny kinova ampahibemaso amin'ireto dia hivoaka afaka ora vitsivitsy, ka izay te hametraka azy ireo ary tsy manana kaonty mpamorona ofisialy tsy ho ela intsony vao hatao.
Tadidio fa ao amin'ny ny tranga WatchOS dia tsy manana beta ho an'ny daholobe isika fa amin'ny macOS, iOS ary tvOS dia manana ny safidy hametraka ireo betsa ampahibemaso ireo isika raha mbola voasoratra anarana amin'ny programa developer. Na eo aza izany, ny tolo-kevitray momba ireo kinova beta ireo dia ny tsy hivoahana amin'ireo kinova beta raha toa ka manampy tsy fahombiazana na tsy fitoviana amin'ny fitaovana na fampiharana anay izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Store » Betas koa dia navoaka ho an'ny mpamorona watchOS 4.2.2 sy tvOS 11.2.5
Samsung dia manolotra ny monitor Qveded curved voalohany amin'ny Thunderbolt 3
MacOS High Sierra 3 beta 10.13.3 azo alaina ho an'ny mpamorona ankehitriny